Eider Africa, Preview, AfricaArXiv, na TCC Africa Mepụta nkuzi iji tinyekwuo ndị nyocha Africa na nyocha ndị ọgbọ - AfricaArXiv
bipụtara AfricaArXiv on 6th December 2021 6th December 2021
Ọrụ a na-esote a usoro nkuzi akụkụ atọ yana nso nso a mkparịta ụka okirikiri haziri site na TCC Africa, Eider Africa, AfricaArXiv, na Prereview wee kwekọrịta na nkwupụta sitere na eLife na Prereview na mbido afọ a na ha jikọrọ aka na nkwa ha jikọrọ ọnụ iji weta ụdị dị iche iche na usoro nyocha ndị ọgbọ.
Kora Korzec, eLife Head of Communities, na-ekwu, sị: “Ọ bụ ezie na inwe ngwakọta nke ụda olu na nyocha nke ndị ọkà mmụta na-abara onye ọ bụla uru nke ukwuu, ọ bụghị otu niile nwere ohere nha anya isonye na usoro a. Akụkụ nke nsogbu ahụ bụ usoro ịkparịta ụka n'Ịntanet ugbu a nke iwu ụlọ nchịkọta akụkọ na ịkpọ ndị nyocha ka ha nyochaa nchọpụta ọhụrụ. Inye onye ọ bụla ohere ịnweta ọrụ ndị a ga-enyere aka imeri ihe mgbochi a, anyị na-atụkwa anya na nkuzi anyị ga-abụ nzọụkwụ n'ụzọ ziri ezi. "
Prereview esonyela na AfricArXiv, Eider Africa, na TCC Africa iji kpokọta ndị nyocha si Africa na ndị ọkà mmụta na-eme nyocha metụtara Africa n'usoro ọgbakọ akwụkwọ akụkọ preprint na-emekọ ihe ọnụ, oru ngo nke 'Nnyocha Nchọpụta - Diversity na nsonye' kwadoro. onyinye sitere na Wellcome. N'oge oru ngo a, e gosipụtara mmasị dị n'etiti ndị ọkà mmụta Africa ịmụtakwu banyere akwụkwọ mbụ na nyocha akwụkwọ. Ugbu a, n'okpuru onyinye Wellcome ọhụrụ, yana mmekorita ya na eLife, Prereview na-aga n'ihu na mmekorita ya na Eider Africa, TCC Africa, na AfricArXIv iji wepụta usoro ọmụmụ ihe na nyocha mepere emepe.
Daniela Saderi, Co-guzobere na onye isi nke Prereview, na-ekwu, sị: "Site na pilot Open Reviewers mmemme anyị malitere ịzụlite akụrụngwa, ọzụzụ, na ohere nduzi maka ndị nchọpụta itinye aka na nyocha nke preprint mepere emepe. Mana ọnọdụ nke emepụtara ihe ndị a bụ nke North America-centric, na enweghị ike ịtụ anya na ọ dabara mkpa na atụmanya nke obodo nyocha niile. A na-asọpụrụ anyị ka anyị na otu ndị kacha mara amara ma na-arụsi ọrụ ike n'ịkwado obodo nyocha ha ogologo oge, na ịbanye n'òtù na-emepụta ihe onwunwe na ohere iji kwado ikike kachasị mma maka nyocha ndị ọgbọ n'etiti ndị nchọpụta Africa. "
Johanssen Obanda, Onye njikwa nkwukọrịta na AfricArxiv, na-ekwu, sị: “Site na mmekorita a, anyị na-ahụ anya na ndị ọkà mmụta sitere na ụlọ ọrụ Africa niile nwere ntụkwasị obi ma na-arụsi ọrụ ike na nyocha ndị ọgbọ n'oge agụmakwụkwọ na ọrụ nyocha. Ọ bụ ezie na ị na-ekere òkè na nyocha ndị ọgbọ abụghị iwu, ịnakwere ntinye aka na nyocha ndị ọgbọ dị ka ihe a na-emekarị na ụlọ akwụkwọ dị elu ga-eme ka obodo ndị na-enyocha ya dịkwuo mma ma na-enye aka n'ụzọ dị mma na mmesi obi ike nke nchọpụta nyocha sitere na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị elu nke Africa. Ọrụ anyị bụ ịmepụta mmata n'etiti ndị nchọpụta na ụlọ ọrụ ndị ọkà mmụta, wulite ikike nke ndị nchọpụta dị ka ndị nyocha, na ịkwalite nghọta na usoro nyocha. "
Maka ogbako a, a ga-akpọ ndị na-eme nchọpụta ka ha sonye n'ụzọ mmụta eduzi iji wuo profaịlụ ha dị ka ndị na-enyocha ndị ọgbọ na-ewuli elu. Iji hụ na scalability na ịbawanye mmetụta nke usoro ahụ, ndị na-ahazi ga-ewebata ihe nlereanya 'na-azụ ọzụzụ', ebe a ga-ewebata ndị ọrụ mbụ nke ndị nchọpụta na ogbako ahụ ma nye ohere ịmụta otú e si kụziere ndị ọzọ ntụziaka na nyocha ndị ọgbọ. A ga-akpọkwa ndị sonyere ka ha nyere aka n'ịmepụta ihe ọzụzụ, megharịa ihe ndị a na mkpa ha na ọnọdụ ha, ma nyefee ogbako ahụ n'obodo nyocha nke ha.
Aurelia Munene, Onye isi nchịkwa na Eider Africa, na-ekwu, sị: “Akụkụkụ Africa, dị ka ógbè ọ bụla ọzọ, nwere ahụmahụ na ihe ọmụma dịgasị iche iche. Usoro nleba anya nke ndị ọgbọ na nke na-ewuli elu bụ otu n'ime ụzọ a ga-esi hụ na a na-ahụ ihe dị iche iche a na ntinye aka nke ndị nchọpụta Africa. Anyị na-agba mbọ ijikọ aka kwalite ikike nyocha ndị ọgbọ nke ndị nyocha Africa wee gbasaa na ha oghere ebe ha nwere ike iduzi mmepụta na itinye ihe ọmụma bara uru na nke nwere ezi uche. "
Joy Owango, TCC Africa Co-Fonding, na Onye na-abụghị onye isi na-agbakwụnye, sị: “Ntụle ndị ọgbọ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ndụ nyocha ma a bịa n'ihe gbasara mbipụta agụmakwụkwọ. Ọ dị mkpa ịmegharị usoro nyocha nke ndị ọgbọ iji kwe ka usoro mbipụta akwụkwọ ziri ezi nke na-enye ohere ndị yiri nke ahụ nye ndị nchọpụta si Africa nke a ga-enye ndị ọgbọ ha na Global North. Ịkwalite ikike na usoro a, na-akọwapụta omume kachasị mma na nyocha ndị ọgbọ, dị mkpa iji chịkọta oke na-enweghị isi n'etiti Global North na Africa ma a bịa n'ihe gbasara mbipụta sayensị."
Dịka akụkụ nke nkuzi a, a na-akpọ ndị sonyere ka ha sonye na ọdọ mmiri ndị na-enyocha ọrụ mbụ eLife yana ndị obodo na-enyocha akwụkwọ mbụ na nyiwe PRReview na Sciety. "Site na mbọ ndị a, anyị na-atụ anya iguzobe ihe nnọchianya nke ndị ọkà mmụta Africa n'etiti ndị na-enyocha ma omenala ma 'bipụta, wee nyochaa' usoro nke mbipụta sayensị - na-agbakwụnye n'ozuzu ụdị olu dị iche iche anyị chọrọ ịhụ na nyocha ndị ọgbọ," Korzec kwubiri.
Gụọ ọkwa a nke eLife bipụtara na mbụ https://elifesciences.org/for-the-press/ce2d4a3e/elife-prereview-and-partners-develop-course-to-involve-more-african-researchers-in-peer-review
Iji gụkwuo maka mmekọ eLife na Prereview iji kwalite oke dị iche iche na nyocha ndị ọgbọ, hụ https://elifesciences.org/for-the-press/3071bfea/elife-and-prereview-partner-to-promote-greater-diversity-in-peer-review.
Iji gụkwuo maka AfricArxiv, TCC Africa, Eider Africa, na echiche Prereview gbasara mkpa ọ dị iwulite obodo na ịbawanye ikike nyocha ndị ọgbọ n'etiti ndị nyocha Africa, gaa na. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/08/23/guest-post-best-practices-and-innovative-approaches-to-peer-review-in-africa, na ịnweta ndekọ vidiyo nke mmemme ndị akwadoro: https://africarxiv.pubpub.org/pub/o4u5mm2f/release/8 na https://info.africarxiv.org/african-perspectives-on-peer-review-a-roundtable-discussion.
Iji gụkwuo maka Obodo Preview, hụ https://content.prereview.org/introducing-prereview-communities.
Na maka ozi ndị ọzọ gbasara otu na Sayensị, gaa na https://sciety.org/groups.
BANYERE ND PART NA-ETI
Afrịka Afrịka bụ nzukọ na-eduzi nyocha, imekọ ihe ọnụ, ma na-etinye aka na mmekorita, na-anọghị n'ịntanetị, yana mmemme nkuzi n'ịntanetị maka ndị ọkà mmụta na Africa. Anyị na-azụ ndị nkuzi ka ha bido usoro nkụzi ha. Anyị kwenyere na mmụta ndị ọgbọ, na-amụ nyocha site na omume, ilekọta onye nyocha niile, yana mmụta mmụta niile. Anyị emeela obodo ndị na - eme nchọpụta na klọb akwụkwọ nyocha anyị ma soro ndị nkuzi mahadum na - arụ ọrụ iji wee zụlite ọzụzụ nyocha gụnyere ihe niile. Weebụsaịtị anyị: https://eiderafricaltd.org/
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwurịta Okwu (TCC Africa) bụ ụlọ ọzụzụ izizi sitere na Africa iji kuziere ndị sayensị nka nzikọrịta ozi dị mma. TCC Africa bụ mba Mmeri mmeri Ntụkwasị obi, guzobere dị ka ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ na 2006 ma debanye aha ya na Kenya. TCC Africa na-enye nkwado ikike n'ịkwalite mmepụta na ọhụụ nke ndị nchọpụta site na ọzụzụ na ọkà mmụta na nkwukọrịta sayensị. Chọpụta ihe banyere TCC Africa na https://www.tcc-africa.org/about.
Nyocha bu oru mmeghe nke ndi otu na-achoghi ego Koodu maka Sayensị na Society. Ebumnuche anyị bụ iweta oke nha anya na nghọta na usoro nyocha nke ndị ọgbọ. Anyị na-emepụta ma na-emepụta akụrụngwa mepere emepe iji mee ka nzaghachi na-arụpụta ihe na preprints, anyị na-agba ọsọ ndụmọdụ ndụmọdụ na ọzụzụ ndị ọgbọ, na anyị na ndị otu nwere mmasị na-ahazi ihe omume na-enye ndị na-eme nchọpụta ohere ịmepụta mmekorita bara uru na njikọ na-emeri ihe mgbochi omenala na obodo. . Mụtakwuo maka nlele mbụ na https://prereview.org.
eLife bụ ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ nke ndị na-enye ego mebere ma ndị nyocha na-edu. Ebumnuche anyị bụ ime ka nchọpụta dịkwuo ngwa site na iji usoro nkwurịta okwu nyocha nke na-akwado ma na-amata àgwà kacha mkpa. Anyị na-achọ ịkwalite omenala nyocha nke na-akwado mmekorita, iche iche na nsonye, ​​na imeghe, na anyị na-akwado preprints na-emeghe-sayensị omume. eLife na-enweta nkwado ego na ntụzịaka atụmatụ site na Howard Hughes Medical Institute, na Knut na Alice Wallenberg Foundation, na Max Planck Society, na Mma. Mụtakwuo na https://elifesciences.org/about.
AfricaArXiv bu ebe nchekwa dijitalụ nke ndi obodo na-eduzi maka nyocha nke Afrika, na-aru oru iji wuo ulo akwukwo ndi Africa nwere nke ghere oghe; a ihe omuma commons nke ndị ọkà mmụta Africa na-arụ ọrụ iji kpalite Renaissance nke Afrika. Anyị na ndị ọrụ nyocha nke ndị ọkachamara guzobere iji nye usoro maka ndị ọkà mmụta sayensị n'Africa maka ịdọ aka ná ntị ọ bụla iji gosipụta ihe ha chọpụtara na nyocha ma jikọọ na ndị ọzọ na-eme nchọpụta na kọntinent Africa na ụwa. Chọpụta ihe banyere AfricArXiv na https://info.africarxiv.org/
Categories:	ọkwaOwuwu ikeNjikọ AkaNyocha ndị ọgbọ